IWatermark + 3.5 ye-Android-Khusela iifoto zakho ezixabisekileyo zeVidiyo kunye neeVidiyo | Iplum iyamangalisa
UMHLA: 9 / 25 / 17
I-San Francisco, CA-iWatermark, yiNombolo 1 kwaye sisixhobo sokubukela kuphela esinokufumaneka kuwo onke amaqonga ama-4, i-iPhone / i-iPad, iMac, iiWindows kunye ne-Android. IWatermark + sesona sixhobo sithandwa kunye nesinamandla sokujonga izixhobo ze-Android.
Ngokukhuselekileyo, khusela kwaye ukhusele iifoto zakho ngombhalo, Imizobo, iVector, Umbhalo kwi-Arc, QR Code, utyikityo, iMetadata kunye ne-Steganographic watermark. Nje ukuba kufakwe ifoto ezi zibonakalayo kunye / okanye ezingabonakaliyo zamawadi zibonisa ifoto okanye ividiyo yenziwe kwaye yeyakho.
I-Plum Amazing CEO ithe "Ukuba wabelana ngefoto okanye ividiyo oyithathileyo nge-imeyile, kuFacebook, ku-Instagram, kuTwitter, njl. Njl. umdali. ” Uye wanqumama, emva koko wongeza, "Esona sisombululo silula kukutyikitya ngokwedijithali usebenzisa iWatermark enegama lakho, i-imeyile okanye i-url emva koko ilungelo lakho lokuqonda iifoto / iividiyo zakho zinonxibelelwano olubonakalayo nolusemthethweni kuwe naphi na apho banokuzula khona."
Iindidi ze watermark kwiWatermark azifumaneki nakweyiphi na enye isoftware. Ezinye iitermark ziyabonakala kwaye ezinye azibonakali. Zombini zisebenza ngeenjongo ezahlukeneyo. I-watermark ebonakalayo kulapho uphakamisa uphawu lwakho okanye utyikityo lomfanekiso wakho. Iimpawu ezingabonakaliyo ziyabonakala ngokucacileyo kwaye zingcwatywa kwifayile okanye idatha yombala womfanekiso.
Isicatshulwa-Nawuphi na umbhalo kubandakanya imethadatha eneseto sokutshintsha ifonti, ubungakanani, umbala, ukujikeleza, njl.
Umbhalo weArc-Umbhalo kwindlela egobile.
Umzobo weBitmap -Umzobo uhlala uyifayile ye-pp ebonakalayo njenge-logo, uphawu, uphawu lwe-copyright, njl njl.
Vector Graphic -Sebenzisa ngaphezulu kwe-5000 eyakhelwe-ngaphakathi kwivektha (ii-SVG's) ukubonisa imizobo egqibeleleyo nakweyiphi na ubungakanani.
Ikhowudi ye-QR -Uhlobo lwebhakhowudi enolwazi olufana ne-imeyile okanye i-url kwikhowudi yayo.
Ukutyikitya- Sayina, ungenise okanye uskene utyikityo lwakho kwitwermark ukusayina indalo yakho.
I-watermark engabonakaliyo ifihliweyo kuwo wonke umfanekiso, ngaphakathi kwamanani enza iifoto, yimodeli eyaziwayo ebonisa ukuba ngumsebenzi wobugcisa bakho. Kunzima ukususa.
Imethadatha -Yongeza ulwazi (njenge-imeyile okanye i-url) kwi-IPTC okanye kwiXMP yenxalenye yefayile yefoto.
I-StegoMark -StegoMark yindlela yethu yobunini yokufaka ulwazi olufana ne-imeyile yakho okanye i-url kwidatha yomfanekiso ngokwawo. Inokubakho okanye ifihlwe ngegama eligqithisiweyo.
I-iWatermark sisixhobo esikhethekileyo sokujonga iifoto ze-watermark kunye nevidiyo. Ixabiso eliphantsi, elisebenza ngakumbi, elikhawulezayo nelilula kakhulu ukusebenzisa iFotoShop. I-iWatermark yenzelwe ngokukodwa ukubonwa kwemifanekiso ngumenzi weefoto.
* Iifoto zamanzi kunye neevidiyo nazo.
Ukusetyenziswa kwee-watermark ezininzi kwiifoto (okanye) kwiividiyo.
* I-Watermark enye okanye iifoto ezininzi kwimowudi yebatch.
* Isakhono sokwenza, sokugcina kunye nokufaka iintlobo ezi-7 zeewark, ngaphezulu kakhulu kunayo nayiphi na iapps. Iimpawu ezi-7 ezipheleleyo = 5 ezibonakalayo + 2 ezingabonakaliyo ezidweliswe ngezantsi.
* Isebenza ikawusi okanye ngokudibeneyo neKhanyiso, iFotohop, iifoto zeApple, iifoto zikaGoogle kunye nabanye abaququzeleli bezithombe
* Ukubheja okanye ukulandelelana ngokulandelelana.
* BALULEKILE: Ukudibanisa okanye ukubala ngokupheleleyo kweempawu zewatch. Ibalulekile xa ibatch ilungisa ukusonjululwa ezahlukileyo kunye neefoto zokuqhelanisa.
* Uyilo, uhlele kwaye ulawule ithala leelayibrari.
Iimpawu zi-metadata (i-GPS, i-Exif, i-XMP, amanani, umhla / ixesha) ezinokongezwa kwiitermark zetekisi.
* Jonga kuqala ngokulula
* Igalelo / ukuvela / kuzo zonke iintlobo zeefayile eziphambili iJPEG, TIFF, PNG, RAW, njl.
* Yenza isicatshulwa, igrafu, okanye i-watermark ye-QR.
* Lungisa i-opacity, ifonti, umbala, umda, isikali, ukujikeleza, isithunzi, iziphumo ezizodwa, njl.
* Iifonti ezingama-292 ezilungileyo kakhulu kwiitermark zakho zetekisi.
* Bhala umxholo kunye nembonakalo
* Iskena sokutyikitya ukungenisa kwangoko utyikityo lwakho okanye enye imizobo njenge-watermark.
* Imbonakalo yangaphambili kunye nokuhlela ifonti, umbala, isikali, ukukhanya, ubukhulu, indawo kunye nekona.
Jonga imethadatha kunye neefif kwiifoto.
* Ngokukhawuleza i-32/64 ye-app enemisonto emininzi enokusebenzisa ii-CPU / ze-GPU's.
* I-iWatermark kuphela ene-watermark ye-steganographic ebethe / ibethela ulwazi olungabonakaliyo kwifoto.
* Incwadana enkulu kunye nenkxaso.
* Yabelana ngokulula kuFacebook, Flickr, Instagram, Twitter kunye nezinye ezininzi.
* Umphathi weWatermark onokulandelela amakhulu eewatch. Umphathi ukwavumela ukukhiya / ukuvula, ukuvula igama kwakhona, ukucima, ukujonga kwangaphambili iiwatchark.
* Ukuhlaziywa rhoqo kunye nokuphuculwa.
✔ Ngalo lonke ixesha, i-watermark enegama, i-imeyile okanye url ukuze indalo yakho ibe noqhagamshelo olusemthethweni olibonakalayo kuwe.
✔ Wutyikitye ngokomnxeba umsebenzi wakho / iifoto / imizobo / umsebenzi wobugcisa kunye ne-iWatermark, buyisela impahla yakho yobuntununtunu kwaye ugcine ulwamkelo olufanele.
✔ Ngokulula, khusela iifoto zakho ngeewotshi ezibonakalayo nezingabonakaliyo ezibonisa ukuba zenziwe kwaye zezakho.
Inguqulelo 3.5 Inguqulelo
-Ngenisa iifoto enye okanye ezininzi kwiDropbox. Sebenzisa i-Hardware / OS isitshixo sokubuyela umva kulawulo oluphezulu.
- Uzinzo olukhulu kwiimeko zeememori eziphantsi.
Ii-watermark ezininzi zinokufakwa nakweyiphi na ividiyo njengoko ubunokuyenza kwiifoto.
-Isikhulisi somfanekiso sivela kwimpompo ende emfanekisweni ebonisa indawo ephakanyisiweyo phantsi komnwe
-I-Watermark ngoku ijongiwe ngokucofa naphina kwinto ekuluhlu lwewatch kunokuba ucofe uphawu lokujonga
-Ifoto inokwabiwa kule app kwi-Photoshop Express
Iifayile zevidiyo zeWatermark.
Le app ilungile ukuba isetyenziswe kunye neCanon Inc., i-Nikon Inc., i-Olimpiki Inc., i-Inc.
Isoftware ePlum emangalisayo namhlanje ibhengeze ingxelo ngo-3.5 ye-iWatermark Pro ye-Android. I-iWatermark, sisixhobo ekuphela kwaso esibonakalayo kuwo onke amaqonga ama-4, i-Android, i-iPhone / i-iPad, iMac kunye neeWindows. I-iWatermark + yinto eyimfuneko yokujonga ii-watermarking kubafoto bezobugcisa kwezeshishini kunye nokuzisebenzisa. Batch okanye ulandelelwano ngokulandelelana. Ukudibana nokulinganisa ngokupheleleyo. Iintlobo zamanzi ziyabandakanya, Isicatshulwa, iGrafu, iVector, isicatshulwa kwiArc, QR khowudi, utyikityo, iMetadata kunye neSteganographic
IWatermark + yasimahla kwi-Android (yongeza 'Yenziwe ngeWatermark +' kwiifoto) Khuphela ikhonkco 
IWatermark + ihlawulelwe i-Android (inguqulelo epheleleyo, akukho ntengiso, akukho kuthenga kwangaphakathi nohlelo) Khuphela ikhonkco 
Umfanekiso weskrini 1 - Zonke ii-watermark 
Isikrini 2-Ukubekwa kwewatchermarket 
Isishwankathelo seVidiyo - 
IWatermark + i-Icon Icon 1024 × 1024 
IPlum emangalisayo, iLlc yinkampani eyimfihlo ebekelwe ukwenza iMac, iiWindows, iiapps ze-iOS kunye ne-Android. IPlum Amazing ngumboneleli wehlabathi kwizicelo zeselfowuni kunye nedesktop ukusukela ngo-1995. IPlum Amazing yenza kwaye ithengise isoftware ngeyayo, iwebhusayithi kaGoogle kunye neApple kodwa ikwenza nomsebenzi wophuhliso (wenkqubo) wezinye iinkampani kunye nabathengi ngakumbi kwindawo yokufota. Sinomdla wokwenza iimveliso ezinkulu ezinjengeCopyPaste, iWatermark, yKey, iClock, iTinyAlarm, iTinyCal, iPixelStick nezinye. Ilungelo lokushicilela (C) 2017 Plum Iyamangalisa. Onke Amalungelo Agciniwe.